Farmaajo oo shirkii 3aad uu ku dhawaaqay kaddib 8 February oo qarka u saaran inuu baaqdo - Banaadisom
#1438 (no title)
Home Wararka Maanta Farmaajo oo shirkii 3aad uu ku dhawaaqay kaddib 8 February oo qarka...
Farmaajo oo shirkii 3aad uu ku dhawaaqay kaddib 8 February oo qarka u saaran inuu baaqdo
Madaxweyne Farmaajo ayaa wajahaya hubaal la’aan awooddiisa dowladnimado, tan iyo markii uu muddo xileedkiisa dhammaaday 8 February.
Cadaadiska siyaasadeed ee uu Madaxweynaha la kulmayay wixii ka dambeeyay hirgelin la’aanta heshiiskii 17 September iyo khilaafkii ka dhashay ayaa isa soo tarayay, waxaana badankood uga imaanayay Dowlad Goboleedyada, sida Puntland iyo Jubbaland.
Shirkii u dambeeyay ee dowladda Federaalka, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir ee ka dhacay Dhuusamareeb 1-5 February ayaa natiijo la’aan ku soo dhammaaday, iyadoo Madaxweynuhu uu isaga soo tagay, shirka oo aan wax heshiis ah laga gaarin, waxaana taas ay keentay in muddo xileedkiisu dhammaado 8 February.
Shirka berri 4 March uu Madaxweyne Farmaajo ku dhawaaqay haddii uu qabsoomi waayo waxaa uu noqonayaa markii saddexaad oo muddo bil gudahood ku dhici waayo Shir uu Madaxweynuhu isugu yeeray DFS iyo DG oo aanay Puntland iyo Jubbaland ka soo qeyb gelin tan iyo markii muddo xileedkiisa uu dhammaaday 8 February.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horay u iclaamiyay 15 bishii hore ee Febraayo shir ka dhici Garowe, kaddib markii uu fashilmay shirkii Dhuusamareeb, Puntland ayaa ku gacan seyrtay inuu shirkaas ka dhaco Garowe, taas bedelkeed waxay soo jeedisay inuu ka dhaco Muqdisho.
Sidoo kale Farmaajo ayaa soo saaray war saxaafadeed uu shir isugu yeeray dowlad goboleedyada 18-19 Febraayo ayuu muddeeyay shir ka dhici doona Muqdisho, inkastoo xilligaas Muqdisho ka jireen xiisado siyaasadeed iyo bannaan baxyo ay iclaamiyeen Mucaaradka, ku dhawaaqida shirkaas ayaa loo arkayay inuu uga gol lahaa si uu bannaan baxa Musharxiinta meesha uga saaro, balse wax aan la fileyn ayaa dhacay oo ahaa dhacdadii habeenkii 19 Febraayo ee lagu weeraray Hotelkii ay degenaayeen Madaxweynayaashi hore iyo subixii jimcaha oo lagu rasaaseeyay dibad baxii ay horboodayeen Musharaxiinta.
Si kastaba ha ahaatee haddii markii saddexaad shirku qabsoomi waayo waxaa calaamad su’aal noqon doona in go’aamada Madaxweynaha aanu dhaqan geli doonin, taasoo ay u badan tahay in markaan qaadan doonaan oo awoodda ay la wareegaan Xafiiska Qaramada Midoobey
CC Shakuur oo kiiska JANAN la mid dhigay dacwadda laga gudbiyey Netanyahu
Shirkii Afisyoone oo mar kale hakad la geliyey maanta iyo sababta ka dambeysa
Maxay tahay arrinta Farmaajo ‘uu rabay’ in musharaxiinta mucaaradka ku dhaqaaqaan?